လီဆူစာပေနှစ် (၁၀၀)ပြည့် ဂျူဗလီပွဲတော် မြစ်ကြီးနားမြို့၌ ကျင်းပ
မူလသို့ > December,2017 > dec15
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများထဲမှ လီဆူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့၏ စာပေကို ၁၉၁၇ ခုနှစ်မှ စတင်တီထွင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံလီဆူစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဗဟိုကော်မတီ၊ ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီက ကြီးမှူးကျင်းပသည့် လီဆူစာပေနှစ်(၁၀၀)ပြည့် ဂျူဗလီပွဲတော်ကို မြစ်ကြီးနားမြို့ ပမ္မတီး ရပ်ကွက်၊ လီဆူစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဗဟိုကွင်း၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
ရှေးဦးစွာ ပွဲတော်၌ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်စား ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးနေဝင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကိုယ်စား ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီး ဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲနိုင်တို့က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားကြသည်။
ယင်းနောက် လီဆူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဦးအာတီယောဟန်က အမှာစကားဆက်လက်ပြော ကြားပြီး ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စား အလှူငွေကျပ်သိန်း(၅၀)နှင့် လီဆူစာအုပ်စာပေများကို နှစ်(၁၀၀)ပွဲဖြစ် မြောက်ရေးကော်မတီထံပေးအပ်ခဲ့ရာပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအားဖူရီလီမီက ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ လီဆူစာပေနှစ် (၁၀၀)ပြည့်အထိမ်းအမှတ် မော်ကွန်းကျောက်တိုင်ကို မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ် ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ညီညီဆွေ၊ ပြည်နယ်လီဆူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်လီဆူတိုင်း ရင်းသားရေးဝန်ကြီးဦးဂူဆာ၊ ဗဟိုလီဆူစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီနာယကဦးအောင်သိန်း၊ အမျိုးသားလွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးယောနနှင့် ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတို့က ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးကြပြီး တိုင်းမှူး နှင့် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး တို့က မော်ကွန်းကျောက်တိုင်ကို စက်ခလုတ်နှိပ်ဖွင့်လှစ်ပေးကြသည်။
ယင်းနောက် လီဆူရိုးရာကွင်းအတွင်း၌ လီဆူတိုင်းရင်းသားတို့၏ ရိုးရာကွာချဲအကကို တစ်ပျော်တပါး စုပေါင်းကခဲ့ကြသည်။
ယနေ့ကျင်းပသည့် လီဆူစာပေ(၁၀၀)ပြည့်ပွဲတော်ကို ဒီဇင်ဘာ(၁၄)ရက်ညနေပိုင်းတွင် အဆိုပါကွင်းမုဒ်ဦး ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့၍ လီဆူစာပေဟောပြောပွဲများ၊ ချီးမွှမ်းကိုးကွယ်ခြင်းများ၊လီဆူရိုးရိုးရာအမွေအနှစ်ဖြစ်သည့် ဒူးလေး ပစ်ပြိုင်ပွဲ၊ လီဆူရိုးရာကွာချဲအကပြိုင်ပွဲများနှင့် ပိုက်ကျော်ခြင်း၊ ကျား/မဘော်လီဘော၊ ဖူဆယ်စသည့်အားကစား ပြိုင်ပွဲများအပြင် လီဆူတိုင်းရင်းသားတို့၏ စာပေ၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံပြခန်းအပါအဝင် ဈေးဆိုင်ခန်းများ ဖြင့် ဒီဇင်ဘာ(၁၇)ရက်နေ့ထိ ပြုလုပ်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
လီဆူစာပေသည် ၁၉၁၃ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်အက္ခရာနှင့် အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါကိုအခြေခံ၍ (Q)အက္ခရာမှအပ ကျန် အင်္ဂလိပ်အက္ခရာများအပြင် အင်္ဂလိပ်စာ၌မရှိသော လီဆူအသံထွက်များကိုရေးနိုင်ရန် အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ ပြောင်းပြန် (၁၅)လုံးကို ထည့်သွင်းအသုံးပြု၍တီထွင်ခဲ့ပြီး၁၉၁၇ ခုနှစ်သို့ရောက်သောအခါ စာပေသင်ခန်းစာကို လက်ရေးမူဖြင့် ထုတ်ဝေပြီး စတင်သင်ကြားပေးခဲ့နိုင်သည့်အပြင် လီဆူစာပေ ဖြစ်ကြောင်းကို နိုင်ငံတကာစာပေခွင့်ပြုချက်အမှတ် Reg; No. GBC. PO421, Secr9(g) ဖြင့် ၁၅-၇-၁၉၂၂ တွင် အသိအမှတ်ပြုပြဌာန်းခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ၁၉၁၇ ခုနှစ်မှ စတင်၍ လီဆူစာပေအက္ခရာကို စတင်ထိန်းသိမ်းသုံးစွဲလာနိုင်ခဲ့ရာမှ ယနေ့တွင် လီဆူစာပေနှစ်ပေါင်း (၁၀၀) ပြည့်ပြီဖြစ်သောကြောင့် ယခုပွဲတော်ကို တရုတ်၊ ထိုင်း၊ အမေရိကန်နှင့် အခြားဥရောပနိုင်ငံများမှ လီဆူ တိုင်းရင်းသားများ စုစည်း၍ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပရခြင်းဖြစ်သည်။